Saxeexa cusub ee Manchester United ee Facundo Pellistri ayaa markii uu soo gaadhay xarunta tababarka Carrington, waxa uu sharraxaad ka bixiyey naftiisa iyo qaab ciyaareedkiisa.
Laacibkan 18 jirka ah ayay Manchester United £10 milyan oo Gini kagala soo wareegtay kooxda reer Uruguay ee Penarol, waxaana uu tababarkii ugu horreeyey la qaatay ciyaartoyda waaweyn ee Red Devils.
Facundo Pellistri oo qolinka ku duugay heshiis shan sannadood ah oo uu Manchester United u saxeexay ayaa waxa kale oo qandaraaskiisa ku jira sannad kale oo doorasho ah oo uu sii kordhin karayo.
Xiddigan da’da yar oo xeeladdiisa ciyaareed ay tahay mid hibo ah, ayaa waxa uu yahay mid dheereeya oo kubaddana inta badan aanay lugtiisa ka bixin, laakiin haddana jecel inuu caawiyo goolal oo uu kubadda u dhiibo ciyaartoyda kooxdiisa, sida uu ku sheegay waraysigii ugu horreeyey ee uu bixiyey.
Facundo Pellistri waxa uu kulankiisii ugu horreeyey u saftay kooxdiisii hore ee Penarol bishii August ee sannadkii hore, waxaanu markiiba muujiyey sida ay xirfaddiisu u tahay mid sarraysa oo kusoo baxaysa kooxaha waaweyn.
Waraysigii ugu horreeyey ee uu bixiyey markii uu yimid xarunta tababarka oo uu siiyey website-ka Manchester United ayuu ku yidhi: “Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan u saxeexo Manchester oo ka mid ah kooxaha ugu wanaagsan taariikhda. Waxa dhab ahaan farxad ii ah inaan la xidhiidho oo aan wax ka barto ciyaartoyda weerarka sida Greenwood, Martial iyo Rashford.”
Isaga oo sharraxaya qaab ciyaareedkiisa waxa uu Pellistri yidhi: “Anigu waxaan ahay ciyaartoy dheereeya oo jecel inuu kubadda hayo, sidoo kalena ciyaartoyda asxaabtiisa ah caawimaad u sameeya.”